December 2016 - Page 16 of 16 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 1, 2016 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sideed oday dhaqameed gowracday sidoo kalena dishay ugu yaraan todobo qof kadib muran ka dhashay bixinta sakada, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Muranka oo isku badalay dagaal xoogan […]
December 1, 2016 Mohammed Omer Ahmed Mulla 0
Jowhar-(Puntland Mirror) The Jalalaqsi district governor of Hiran region, Mohamed Abdulle Fidow wounds in a attack which is targeted at his convey from Jowhar town to Jalalaqsi , according to the reports. The attack happened on […]
Jowhar-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa ku dhaawacmay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen gaadiid uu la socday oo ka tagay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Jalalaqsi, sida ay wararku […]
Bulshada Soomaaliyeed ee kunool Columbus Ohio iyo dhammaan Mareykanka oo dhan ayaa cabsi lasoo deristay kadib markii wiil Soomaali ahaa oo qaxooti ku ah wadankaas uu 11 qof ku dhaawacay weerar toorayeyn ah oo uu […]
Dakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad oo geeriyooday
Garoowe-(Puntland Mirror) Dakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad sidoo kale loo yaqaan (MJ) oo aqoonta u lahaa qaliinka xanuunada neerfaha ayaa geeriyooday, sda ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Maanta oo Talaado ah ayuu ku geeriyooday isbitaal [...]
Tirada dhimashada weerarkii Al-Shabaab ee magaalada Afgooye oo gaartay 15 qof
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dadkii la dilay kadib weerar dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose shalay oo bishu ku beegnayd 18-ka Oktoobar ayaa gaartay 15 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad. [...]
Sawiro: Ciidamada nabadsugida Soomaaliya ee NISA oo deegaanka Ceelasha Biyaha ku qabtay gaari hub siday
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya NISA ayaa maanta oo Arabco ah qabtay gaari laga buuxshay walxaha qarxa iyo hub ay kamidyihiin gantaalada bumbooyinka lagu xiro iyo hub kale oo fudud. Sidoo kale waxay [...]